Saraakiil Lagu Dilay Qarax Ka Dhacay Gobalka Qandahaar. – Bogga Calamada.com
Saraakiil Lagu Dilay Qarax Ka Dhacay Gobalka Qandahaar.
Qaraxan oo loo adeegsaday Miinada dhulka lagu aaso ayaa lala beegsaay saraakiil ciidan oo ka tirsan maamulka Ridada Afghanistan, waxa uuna qaraxan sigaar ah kaga dhacay magaalada Qandahaar ee Konfurta dalkaasi.
Inta la xaqiijiyay waxaa qaraxan lagu dilay saddex sarkaal oo ka mid ah saraakiisha sar sare ee dhanka ciidanka maamulka ridada Afghanistan, sidoo kale qaraxa waxaa lagu dhaawacay saddex askari oo ka mid ah ilaalada gaarka ee saraakiisha Miinada lagu dilay.
Qaraxan oo ay Mas’uuliyaddisa sheegatay Imaarada Islaamiga Afghanistan ayaa kusoo aadaya xilli ciidamada Mujaahidiinta Dhaalibaan ay isla gudaha Qandahaar ku dileen mid ka mid ah Culimaa’u Suuga la shaqeeyay maamulka Ridada Afghanistan.
Dhanka kale Guutada Madaafiicda Imaarada Islaamiga ayaa tiro madaafiic ah ku garaacay saldhiga Bagram ee Gobalka Barwaan kaasi oo ah saldhiga ugu weyn ciidamada Saliibiyiinta Mareykanka ay ka sameysteen dalka Afghanistan.
Madaafiicda ayaa la xaqiijiyay iney ku dhaceen gudaha saldhiga kuwaasi oo khasaara lagu gaarsiiyay askarta Saliibiyiinta Mareykanka.
Weeraradan ka kala dhacay Konfurta iyo Waqooyga dalka Afghanistan ayaa qeyb ka ah howlgalka dagaaleedka Al-khandaq ee ciidamada Mujaahidiinta Dhaalibaan sida dar darka ah kaga wadaan guud ahaan gobalada dalkaasi.